Chirikadzi yeZarefati Nemuprofita Eriya | Zvidzidzo zveBhaibheri Zvevana
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Bicol Bislama Boulou Bulgarian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (South Africa) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Edo Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Herero Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Ibinda Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Kabiye Kabuverdianu Kannada Kazakh Kekchi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Mam Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mixe Moore Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuItaly Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Nias Nigerian Pidgin Norwegian Nyungwe Nzema Okpe Ossetian Otetela Pangasinan Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tandroy Tarascan Tatar Telugu Thai Tiv Tojolabal Totonac Tshwa Tsonga Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urhobo Uruund Valencian Venda Vezo Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Mwanakomana Wechirikadzi Akamutswa
Panguva yekusanaya kwemvura, Jehovha akaudza Eriya kuti: ‘Enda kuZarefati. Chirikadzi iri ikoko ichakupa zvekudya.’ Paakasvika pagedhi reguta, Eriya akaona chirikadzi yaiva murombo ichiunganidza huni. Akakumbira chirikadzi yacho mvura yekunwa. Mukadzi wacho paaienda kunotora mvura, Eriya akabva amuudzawo kuti: ‘Ndiunzirewo chingwa.’ Asi chirikadzi yacho yakati: ‘Handina chingwa chekukupai ini. Ndingori netufurawa netumafuta tunokwana kungobika zvekudya zvangu nemwanakomana wangu chete.’ Eriya akabva audza mukadzi wacho kuti: ‘Jehovha avimbisa kuti kana ukandibikira chingwa, furawa yako nemafuta ako hazvizoperi kusvikira kwanaya zvakare.’
Saka chirikadzi yacho yakaenda kumba ikanobikira muprofita waJehovha chingwa. Sezvakanga zvavimbiswa naJehovha, chirikadzi iya nemwanakomana wayo vakaramba vaine zvekudya munguva yekusanaya kwemvura. Mukadzi wacho akangoramba aine mafuta nefurawa muzvirongo zvake.
Asi pane dambudziko rakazoitika. Mwanakomana wechirikadzi yacho akarwara chaizvo achibva afa. Chirikadzi yacho yakateterera kuna Eriya kuti aibatsire. Eriya akatora mukomana wacho mumaoko aamai vake achibva aenda naye mukamuri repamusoro reimba yechirikadzi yacho. Akanomuradzika pamubhedha, achibva anyengetera achiti: ‘Jehovha ndinokumbirawo kuti muite kuti mwana uyu avezve mupenyu.’ Unoziva here kuti nei zvaizoshamisa kuti Jehovha aite izvozvo? Nekuti sekuziva kwatinoita, hapana mumwe munhu akafa akanga ambomutswa izvi zvisati zvaitika. Uyewo, chirikadzi iyi nemwanakomana wayo vakanga vasitombori vaIsraeri.
Asi mukomana wacho akabva ava mupenyu, ndokutangazve kufema! Eriya akabva ati kuchirikadzi yacho: ‘Ona! Mwanakomana wako ava mupenyu.’ Mukadzi wacho akafara chaizvo ndokuti kuna Eriya: ‘Chokwadi muri munhu waMwari. Ndinodaro nekuti munongotaura zvamunenge maudzwa naJehovha kuti mutaure uye zvinotoitika.’
“Fungai nezvemakunguo: Haadyari mbeu kana kukohwa; haana matura kana tsapi; asi Mwari anoapa zvekudya. Ko imi hamukoshi kupfuura shiri here?”​—Ruka 12:24
Mibvunzo: Chirikadzi yeZarefati yakaratidza sei kuti yaivimba naJehovha? Tinoziva sei kuti Eriya aiva muprofita wechokwadi waMwari?
1 Madzimambo 17:8-24; Ruka 4:25, 26
Chirikadzi yeZarefati Yakapiwa Mubayiro Nokuti Yaiva Nokutenda
Kumutswa kwemwanakomana wechirikadzi ndechimwe chezviitiko zvakanyatsosimbisa kutenda kwayo muupenyu. Tingadzidzei kwairi?